Downloads 24 002
Hekuno UKMIL Chinook akasikwa GMAX nokuda FSX. Achishandisa dhumhira nzvimbo ine uye DDS textures, muenzaniso raro chizvarwa nokuda FSX SP2 / P3D. Zvinosanganisira rakapotsa Cockpit (VC) multiple maonero / nzvimbo, Animations dzakadai pakuvhurwa rwemberi yehondo nezvimwewo zvichienderana womuenzaniso. Zvinosanganisira tsika mitinhimira uye 12 textures kubva kunyika dzakasiyana-siyana.
The Boeing CH-47 Chinook chinhu American mapatya-injini, tandem rotor rinorema-burutso neherikoputa. Aine pamusoro nokumhanya 170 nokusunungura mapfundo (196 mph, 315 km / h) zviri kudarika panguva utility uye kurwisa helicopters pakati 1960s. The CH-47 ndomumwe shoma ndege iyoyo kuti achiri kugadzirwa pamberi mutsetse basa, pamwe pamusoro 1,179 akavaka zvevakomana. mabasa ayo chikuru inosanganisira boka racho, atirari emplacement uye yekurwira resupply. It ane navanopinda vachizvitakudza ndokudzikunda panguva rwemberi fuselage uye nhatu kwokunze nhumbi hooks.The Chinook yakagadzirirwa uye pakutanga akasikwa Boeing Vertol mukutanga 1960s. The neherikoputa zvino anobudiswa neZvapupu Boeing Rotorcraft Systems. Chinooks chatengeswa kuti 16 marudzi pamwe US ​​Army uye Royal Air Force (ona Boeing Chinook (UK dzomutauro)) kuva vanozvishandisa pakukura. The CH-47 ari pakati mupfungwa anosimudza Western helicopters. (Wikipedia)
Downloads: 9 474
Downloads: 7 810
Downloads: 29 298
Downloads: 9 692
Downloads: 16 006